किन बाँधिन्छ दाँतमा तार ?-Brtnepal.com
किन बाँधिन्छ दाँतमा तार ?
सामान्य बोलीचालीमा अर्थोडोन्टिक उपचार भन्नाले दाँतमा तार बाँध्ने वा ब्र्रेसेज लगाउने बुझिन्छ । यो उपचार धेरैजसो किशोरावस्थामै गरिएको हुन्छ । अर्थोडोन्टिक्स दन्त चिकित्साशास्त्रको एउटा यस्तो विशेष विभाग हो, जसमा बाङ्गोटिङ्गो र नमिलेको दाँतको उपचार गर्नुको साथै अनुहारको हड्डीको समस्याको रोकथाम र उपचार गरिन्छ ।यो उपचार कति प्रकारका हुन्छन् ?यसमा दाँत सीधा गर्ने मात्र नभई बच्चाको हड्डी र वयस्कमा जवडाको समस्या (जव डेफोमिर्टी)को समाधान अर्थोग्नाथिक सर्जरीद्वारा गरिन्छ । दाँत निकाल्ने, राख्ने या फिक्स्ड दुवै हुन सक्छन् । फिक्स्डमा प्रायःजसो मेटलको वा दाँतको रङ कम देखिने सेरामिक अनि अरु किसिम भनेको दाँतको पछाडिबाट नदेखिने गरी गर्ने लिङ्गुअल ब्रससेज आदि हुन्छन् । फिक्स्ड अर्थोडोन्टिक उपचार किन गर्ने ?दाँत बाङ्गोटिङ्गो र नमिलेको देखिनु वा अनुहारको हड्डीको समस्याको कारण यस्तो हुन सक्छ ।१. बाङ्गोटिङ्गो दाँतले गर्दा सफा गर्न गाह्रो भई किरा लाग्ने अनि गिजा र दाँतको वरिपरिको हड्डीको रोग लागी दाँत चाँडै झर्नु ।२. अनुहार सुन्दर नदेखिनु ।३. दाँत उछिट्टिएमा चोट लाग्ने सम्भावना बढी हुनु ।४. अनुहार नराम्रो देखिएको कारण मानसिक तनाव हुनु र खुलेर कुरा नगर्नु ।५. खाना चबाउन, बोल्न र श्वास फेर्न गा¥हो हुनु आदि ।६. दाँतको टोकाइ नमिलेर अनुहारको जोर्नीको (टीएमजे ज्वाइन्ट) समस्या देखिनु ।तसर्थ यी कुराबाट बच्न अर्थोडोन्टिक उपचार गर्नुपर्छ ।कहिले गर्ने ?साधारणतया यो उपचारको उपयुक्त समय किशोरावस्थाको सुरुको उमेर अर्थात् १३–१४ वर्ष हो। यस बेलामा बच्चाको दाँत साटी सक्नु, केही मात्रामा अनुहारको हड्डीको बढ्ने प्रक्रिया बाँकी रहनु र ब्रेसेज लगाई समाजमा सजिलैसँग एड्जस्ट गर्ने क्षमता भएका कारण उपयुक्त मानिन्छ तर जुन बच्चामा अनुहारको हड्डी वा जवडाको समस्या देखिएको छ भने यो उपचार ८–१२ वर्षमै सुरु गर्नुपर्छ । यो उपचार वयस्क उमेरमा गर्नै मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन । दाँतलाई समातेर राख्ने वरिपरिको हड्डी स्वस्थ छ भने यो उपचार गर्न मिल्छ तर पहिलेको तुलनामा अलिक बढी समय लाग्छ । समस्या कसरी थाहा पाउने ? बाङ्गोटिङ्गो नमिलेको दाँत, दाँतको बीचमा खाली ठाउँ, दाँत धेरै अगाडि आएको, कुनै दाँत नआएको (इेम्प्यक्टेड) वा अनुहार नमिलेको जस्तो लागेको अवस्थामा दन्तचिकित्सक वा अर्थोडोन्टिक विशेषज्ञसँग परीक्षण गराई थाहा पाउन सकिन्छ । अर्थोडोन्टिक विशेषज्ञले केही रेकर्ड जस्तै : विशेष एक्स–रे, दाँतको नाप तथा तस्बिर लिई त्यसको आधारमा बिरामीको समस्या समाधान हुनेगरी उपचार सुरु गर्छन् ।कोसँग उपचार गराउने ? फिक्स्ड अर्थोडोन्टिक उपचार यसैको विशेषज्ञसँग गराउनुपर्छ, जसले दन्तचिकित्सकको पढाइ पूरा गरेर यही विषयमा स्नातकोत्तर गरी दक्षता हसिल गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गराएको हुन्छ । फाइदा के के छन् ?अर्थोडोन्टिक उपचारले बाङ्गोटिङ्गो नमिलेको दाँत र अनुहारको हड्डीका समस्या समाधान गरी अनुहारलाई सुन्दर मात्र होइन, दाँत र गिजालाई स्वस्थ राखी दाँतको आयु बढाउँछ । स्रोत:स्वास्थ्य खवर पत्रिकाPublished on August 15, 2016 at 10:47 am Loading... यसमा तपाइको मत